laba gabdho oo hal nin ineey isla guursadaan rabo - Hablaha Media Network
laba gabdho oo hal nin ineey isla guursadaan rabo
HMN:- Shankaroon Waxa ay kamid tahay Gabdhaha Soomaaliyeed kuwooda sida weyn ugu xiran Shabakada Caanka Ah Ee Shumis.net iyadoona codsatay wiil tilmaamahan leh si ay nolosha ugu midoobaan.
Shankaroon ayaa Dhanbaalkeeda quruxda badan ku bilaawday sidaan , Marka hore aadbaan idiin salaamayaa dhamaan howl wadeenada Shumis.net anigoona idinkaga mahad celinayo shaqada weyn eed bulshada u heysaan ,
waa markii iigu horeeysay ee hami iga galo inaan soo bandhigo Dareenkeyga mana moodo inaan wax xun sameenayo hadaan danaheyga ka hadlayo.
Marka xigta waxaan jeclahay inaan si sharaf leh u codsado wiil sifaadkaani leh kaasoona si xaqiiqo ah uga run sheegayo si aan waqti badan iskugu sii lumin.
Wiil Da’a diisu tahay 28-38 Sano heysta Shahaado Jaamacadeed waa in qofkaasi wax ka yaqaano nolosha qurbaha Ugu yaraan uu ku noolyahay 3 Sano Banaanka , waa inuu inbadan Aqoonta Diinta iyo tan maadiga ku fiicanyahay.
Hadii uu shuruudahaasi kooban soo buuxsho waxaan jeclaan lahaa inaan wada xariirno , uma ballan qaadi karo inaan dhaqsi ku midoobeyno balse waxaan waqti siin doonaa isfahanka , qodobadaas kuwa lamid ahna gaar ayeey isaga uyihiin inaan su’aalo.